Work With Us | Access Spectrum
For more than 19 years, Access Spectrum is committed to enabling organizations & individuals to use technology to enhance their daily life, and that includes yours. Here in Access Spectrum we haveanumber of opportunities to work with the company at all levels and are looking for dynamic, enthusiastic people to help us take the company to new levels of excellence.
Why Access Spectrum?
•	We create an environment where every individual can be their best and do their best teamwork in service of our customers
•	Our Culture: We win with integrity
•	Our Community: Meritocracy, performance based rewards
•	Our Opportunities: We invest in our people to have skillsets developed as they pursueacareer that fulfills their ambitions and potential
–	Altitude & Responsibility
–	Customer Experience
Recruitment : We are expanding.
• Salary + Overtime + Attendance Bonus
Access Spectrum သည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုနှင့် ဖြန့်ချိရေး ရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး အမျိုးစုံလင်လှသော နည်းပညာပစ္စည်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် သုံးစွဲသူများအတွက် စ လယ် ဆုံး အဆင်သင့် အသုံးပြုနိုင်စေသော အသုံးချနည်းပညာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ မိမိတို့အနေနှင့် အငယ်စား၊ အလတ်စားနှင့် အဖွဲ့အစည်းကြီးများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ခြင်းများ လက်တွေ့အသုံးချမှုပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့် အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများအား ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်လှသော ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများ၊ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်းပစ္စည်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ဖြေရှင်းချက်ပုံစံများအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်အဝဝကို ဖြည့်ဆည်းပေးလျှက်ရှိပါသည်။
၁၉ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း Access Spectrum သည် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တကွ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် နည်းပညာအသုံးချမှုဖြင့် ၎င်းတို့၏ နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝ ကိစ္စအရပ်ရပ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်ချောမွေ့စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ မိမိတို့ Access Spectrum တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် ရာထူးများ အားလုံးအတွက် ဖျတ်လတ်တက်ကြွပြီး စိတ်အားထက်သန်မှုရှိသောသူများ မည်သူမဆို ဖိတ်ခေါ်လျှက် ကုမ္ပဏီ၏ အနေအထားကို နောက်ထပ် အဆင့်များစွာ ထပ်မံတက်လှမ်းနိုင်ရန် ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။
မိမိတို့သည် လျှင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေပြိး ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းဖြစ်စဉ်၏ နှလုံးသားအဖြစ် ခံယူထားပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြပြီး သက်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းပြည့်ဝသူ၊ တိုးတက်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ပါက hr.asc@AccessSpectrum.net သို့ resume ပို့ခြင်းအားဖြင့် အောင်မြင်သောအသင်းအဖွဲ့၏ အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။
Access Spectrum သညျ နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာ ထောကျပံ့မှုနှငျ့ ဖွနျ့ခြိရေး ရှဆေ့ောငျကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈပွီး အမြိုးစုံလငျလှသော နညျးပညာပစ်စညျးမြား၊ ၀နျဆောငျမှုမြားနှငျ့ သုံးစှဲသူမြားအတှကျ စ လယျ ဆုံး အဆငျသငျ့ အသုံးပွုနိုငျစသေော အသုံးခနြညျးပညာမြားကို ပံ့ပိုးပေးပါသညျ။ မိမိတို့အနနှေငျ့ အငယျစား၊ အလတျစားနှငျ့ အဖှဲ့အစညျးကွီးမြား၏ နညျးပညာဆိုငျရာ လုပျငနျးစဉျခမြှတျခွငျးမြား လကျတှအေ့သုံးခမြှုပိုငျးဆိုငျရာမြားနှငျ့ အုပျခြုပျမှုပိုငျးဆိုငျရာ ကိစ်စမြားအား ပိုမိုကောငျးမှနျတိုးတကျလာစရေနျအတှကျ ကယျြပွနျ့လှသော ကှနျပြူတာပစ်စညျးမြား၊ ကှနျယကျခြိတျဆကျခွငျးပစ်စညျးမြား၊ ၀နျဆောငျမှုမြားနှငျ့ ဖွရှေငျးခကျြပုံစံမြားအား ထောကျပံ့ပေးခွငျးဖွငျ့ သုံးစှဲသူမြား၏ လိုအပျခကျြအဝဝကို ဖွညျ့ဆညျးပေးလြှကျရှိပါသညျ။
၁၉ နှဈကြျောကာလအတှငျး Access Spectrum သညျ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့တကှ တဈဦးတဈယောကျခငျြးစီအတှကျ နညျးပညာအသုံးခမြှုဖွငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ နစေ့ဉျနထေိုငျမှုဘဝ ကိစ်စအရပျရပျကို ပိုမိုကောငျးမှနျခြောမှစေ့ရေနျ လုပျဆောငျပေးလြှကျရှိပါသညျ။ မိမိတို့ Access Spectrum တှငျ အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးအနဖွေငျ့ ရာထူးမြား အားလုံးအတှကျ ဖတျြလတျတကျကွှပွီး စိတျအားထကျသနျမှုရှိသောသူမြား မညျသူမဆို ဖိတျချေါလြှကျ ကုမ်ပဏီ၏ အနအေထားကို နောကျထပျ အဆငျ့မြားစှာ ထပျမံတကျလှမျးနိုငျရနျ ကွိုဆိုလြှကျရှိပါသညျ။
မိမိတို့သညျ လြှငျမွနျစှာ ပွောငျးလဲတိုးတကျနပွေိး ဝနျထမျးမြားသညျ ၎င်းငျးဖွဈစဉျ၏ နှလုံးသားအဖွဈ ခံယူထားပါသညျ။ အကယျ၍ သငျသညျ စိတျဓါတျပွငျးပွပွီး သကျဆိုငျရာ အရညျအခငျြးပွညျ့ဝသူ၊ တိုးတကျလိုစိတျရှိသူဖွဈပါက hr.asc@AccessSpectrum.net သို့ resume ပို့ခွငျးအားဖွငျ့ အောငျမွငျသောအသငျးအဖှဲ့၏ အစိတျအပိုငျးတခု ဖွဈရနျ ကွိုဆိုပါသညျ။